काम गर्ने तरिकासम्बन्धी सोह्र बुँदा – www.janabato.com
६ असार २०७७, शनिबार ०७:४३ June 21, 2020 Janabato Online
(नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान नेता माओत्सेतुङको प्रभाव प्रचुर भेटिन्छ । वि. सं.२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिँदा चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भर्खर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको स्थिति थियो । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको ढाँचा, सिद्धान्त, नारा, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा माओ बिचारको स्पष्ट छाप देखिन्छ । माओत्सेतुङको व्यक्तित्व, व्यवहार र दैनिकी समेत नेपाली नेताहरुको लागि एक मोडेल बन्यो । यो प्रभाव पछिल्लो समयमा ‘माओवाद’ र ‘माओवादी जनयुद्ध’ को रुपमा उत्कर्षमा पुग्यो । तर, माओवादलाई पथप्रदर्शक मान्दै आएको माओवादी केन्द्र अहिले बुर्जुवा संसदीय राजनीतिमा लीन भइसकेको नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरी संसदीय राजनीतिमा छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन भएको छ । नेकपामाथि अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसै परिप्रेक्षमा काम गर्ने तरिकामा माओको शैलीलाई अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसको लागि चीनमा क्रान्तिपछि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि काम गर्ने तरिकासम्बन्धी माओत्सेतुङले जारी गरेका सोह्रवटा निर्देशक बुँदाहरु सम्झनु उपयुक्त होला ।-सम्पादक)
१ . समझदार बन, निर्णायक बन
२ . केही सम्भावना देख
एउटा आम कथन के छ भने हामीले भावी कामको लागि सम्भावना देख्नुपर्छ । काममा केही लचिलोपनको सम्भावना देख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । क्वमिन्ताङ्ग सेनाविरुद्ध कार्वाही गर्दा हामीले तिनीहरूलाई दमन गर्न उनीहरूभन्दा कैयौं गुना बढी सैनिकलाई एकत्रित गर्दथ्यौं । बिना तयारी हामी कुनै लडाईं लड्दैन थियौं । समाजवादी निर्माण र नियोजनको लागि पनि काममा हामीले सम्भावना देख्नुपर्दछ । हाम्रो काम हाम्रो योजनाभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ । हामीले यो सम्भवना देख्नुपर्छ कि जनसाधारणले योजनाभन्दा पनि अगाडि बढेर काम गरून् । यदि लक्ष्य निकै नै ठूलो छ भने त्यहाँसम्म पुग्न कठिन हुनेछ, त्यसलाई पार गर्नु त टाढैको कुरा हो । उत्पादन टिमको प्रमुखको अक्सर भनाइ के छ भने “१०,०००को लक्ष्य हाम्रो लागि ठूलो कुरा हैन, तर असफलताको एक सम्भावनालाई प्रतिवाद गर्न १०, ००० सित हामी डराउँछौ ?” अतीतमा यो भनाइले काम गर्ने मजदुरहरूलाई काममा उत्साहित गर्न खराब असर गर्दथ्यो । यदि हामीले जानीबुझीकन जनसाधारणलाई उत्पादन लक्ष्य पार गर्न दिने हो भने तिनीहरू उत्साहित हुनेछन् र पहिलेभन्दा पनि बढी कठोर परिश्रम गर्नेछन् । यसको साथै हामीले उत्पादनप्रति पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ किनकि कुनै पनि चीजप्रति ध्यान केन्द्रित भएन भने यसको अर्थ हुन्छ – त्यसप्रति कुनै पनि नीति नै छैन । यसरी नै साहित्य र कला कर्मको क्षेत्रमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । कुनै पनि नाटक प्रदर्शनमा दर्शकहरूद्वारा सोचविचार, चर्चा गर्ने ठाउँ राखिदिनुपर्दछ । यदि नाटकको पहिलो अङ्क देखेपछि तपाईलाई दोस्रो अङ्कमा के हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुने हो भने प्रदर्शन असफल हुनेछ । यसै किसिमले वक्तालाई केही कुरा नभनिकनै छाडिदिनुपर्दछ ।
३ . छालको गति सरह अघि बढ
१९५७ मा हामीले दुस्साहसवादको विरोध गर्यौं । परिणामतः प्रगतिको स्तर एकदम तल झर्यो र फेरि घोडाको काठीजस्तै माथि उठ्यो । त्यस वर्ष हामीले उत्पादन लक्ष्य तल झार्नु परेको थियो । काम छालको गतिमा अघि बढ्न आवश्यक छ । यस वर्ष पनि हामीले उत्पादन लक्ष्य थोरै तल झार्यौं । वृद्धिदर ४० प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष हामीले १ करोड ६५ लाख टन स्टीलको उत्पादन गर्न कटिबद्ध छौँ र हामीलाई विश्वास छ कि हामीले कोइलाको कोटा पनि पूरा गर्नेछौं । कृषिको लक्ष्यमा हामीले अन्न र कपासको उत्पादनमा बढी जोड दिनुपरेको छ । आगामी वर्ष, उत्पादनको आँकडा केही कम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । १९६१ मा हामीले एउटा महान् अग्रगामी छलाङ्ग मार्न सक्दछौं । “समाजवादी निर्माणलाई प्रवाहको गतिमा अधि बढाउनु पर्दछ ।” “स्वर्ग रिसाएपछि मनुष्यको उमेर घट्दछ, जब पृथ्वीमा वसन्त आउँदछ, अनेकौं बरदान घर भित्रिन्छ ।” प्रत्येक दिन ज्वार आउन सक्दैन । म प्रवाहको (गतिमा अघि बढ्ने कार्यको विरोधी हैन, तर म दुस्साहसवादको विरोधी हुँ ।
४ . बढीभन्दा बढी प्रभावको लागि प्रयास गर
बढीभन्दा बढी प्रभावको लागि योजना बनाऊ । परिस्थितिमा परिवर्तन आएअनुसार योजनामा पनि परिवर्तन गर । यदि परिस्थितिमा परिवर्तन भयो भने परिस्थितिअनुसार मानिसको सोचाइमा पनि परिवर्तन हुनुपर्दछ । यदि त्यसो भएन भने ऊ निश्क्रिय अवस्थामा पुग्नेछ । मस्तिष्कलाई जीवावशेष ( fossil ) बन्न नदेऊ । सामग्रीहरूको मात्रा र मानिसहरूको सङ्ख्याअनुसार योजनाहरूको निर्माण गर । मनोगत रुपले योजनाको निर्माण नगर ।
५ . स्थितिको निरीक्षण गर्न कुशल बन
६ . ठीक समयमा निर्णय गर
प्रत्येक रिपोर्टमा कुनै दृष्टिकोण हुनुपर्छ । कुनै समस्यालाई हल गर्न केही वैकल्पिक तरिका सोच । आफ्नो आधारभूत स्थिति, अलग-अलग दृष्टिकोण, समस्याको मूल बिन्दु र वास्तविक कार्य अवस्थाको बारेमा बताऊ । कुनै गतिरोध हुनु हुँदैन
१२ . जिम्मेवार बन
१३ . गलत चिन्तनबाट मुक्त होऊ
(नोट : यो आधिकारिक दस्तावेज होइन , केवल सन्दर्भको लागि मात्र हो ।)
साभार : कम्युनिस्ट जीवनशैली र कार्यपद्धतिबारे, जनस्रष्टा प्रकाशन गृह
← ‘भर्चुअल’ विमर्श र सिर्जना
गुल्मीको हाडहाडेमा जीप पुरियो, १ जनाको मृत्यु ५ घाइते →
भारतीय अभिनेता इरफान खानको मृत्यु
१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०७:५४ Janabato Online Comments Off on भारतीय अभिनेता इरफान खानको मृत्यु
‘राज्यले दमन गरे जमेर प्रतिरोध गर्छौं’–नेता चन्द
२५ चैत्र २०७४, आईतवार ०२:०७ Janabato Online Comments Off on ‘राज्यले दमन गरे जमेर प्रतिरोध गर्छौं’–नेता चन्द